Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga -enweta $ 2,900 na mgbasa ozi n'efu site na FreeSpace Social, Inc.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga -enweta $ 2,900 na mgbasa ozi n'efu site na FreeSpace Social, Inc.
FreeSpace Social na-ekwupụta na ha ga-enye $ 2,900 na mgbasa ozi efu nye onye ọ bụla kwupụtara onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmentị sonyere na ikpo okwu, dị ka onyinye n'ụdị, n'agbanyeghị agbanyeghị.
Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị kwesịrị ohere ọ bụla dịnụ iji kwusara ọha mmadụ ozi ha na -enweghị iwu siri ike na mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị jikọtara na netwọkụ mmekọrịta ọha. FreeSpace na -emetụta mmetuta dị mma mana kwụsiri ike, na -amanye nkwụsị akaụntụ maka ụdị ọdịnaya rụrụ arụ ma ọ bụ na -ekwesịghị ekwesị. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na-egosipụta nkwenye karịa ndị ibe Big Tech ha ma a bịa n'ịkpọsa mgbasa ozi, ọkachasị ahụike ọzọ, otu okpukperechi, ndị na-azụ ahịa mmadụ, na mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke akụkụ abụọ.
A ga -achọ ka ndị ndọrọndọrọ chọrọ isonye na onyinye mgbasa ozi efu na FreeSpace ka ha nyefee akwụkwọ nkwupụta FEC ha iji ruo eru. Ndị anamachọ ihe ekwuputara ga -enwerịrị profaịlụ FreeSpace ozugbo enwetara ma kwado ụdị FEC.
"Anyị na -anabata ndị na -eme ntuli aka sitere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile ka ha jiri ohere a na -adịghị ahụkebe mgbasa ozi efu na ikpo okwu anyị," Onye isi FreeSpace, Jon Willis kwuru. "Anyị nwere olile anya na nke a ga-enye ohere maka ọha maara nke ọma gbasara ndị na-eme ntuli aka nke kwekọrọ n'ụkpụrụ obodo ha."